आकर्षक डिजिटल आर्टवर्कको लागि झुल्न अधिक फूलहरूको चित्रकारी
डेभिडब्रिडबर्ग सेप्टेम्बर 4, 2020 मार्च 23, 2021
१० डेभिड ब्रिडबर्गले विशेष रूपमा चित्रकारी
नयाँ प्रोजेक्ट शुरू गर्नु कठिन हुन सक्छ। म त्यो बुझ्छु। चीजहरूलाई सानो टुक्रा पार्नुहोस्। यसलाई सरल राख्नुहोस्। एउटा खुट्टा अर्कोको अगाडि राख्नुहोस्।
मैले त्यो गरेँ। अब केहि वर्ष पछि मसँग कलाको 400०० जति कामहरू छन्। शुरुआतीदेखि विशेषज्ञसम्म यी फूलहरूको चित्रकला सजिलो बनाउनको लागि अझ जटिलमा गयो।
मेरो कथा धेरै फरक छ। त्यसैले मेरो कला धेरै फरक छ। र म चुप लाग्दिन। दस कार्यहरू म तपाईंलाई देखाउन लागिरहेको छु एक रोचक कथा छ।
मेरो नाम डेभिड ब्रिडबर्ग हो। म एक पोस्ट आधुनिक कलाकार हुँ। मेरो ईतिहास एक जन्म दोष समावेश गर्दछ। मेरो समस्या एक श्रवण प्रशोधन डिसअर्डर हो। तपाईंसँग सम्भवत पारिवारिक सदस्य वा राम्रो मित्र छ जसलाई केही सीखने कठिनाइहरू छन्।
अन्धा मान्छे को अन्य इन्द्रियहरु उच्च छन्। ठिक त्यस्तै केही कारणले गर्दा म एक दृश्य कलाकार हुँ।
संयोगवश कलेज मा कला मा गिर, म ती कक्षा मा हुन रमाईलो। पाठमा स्पन्जको रूपमा भिज्दै, म आफैलाई धेरै माग गरें। मुख्य प्राध्यापक मन परायो।
पाठ सबै भन्दा राम्रो थियो। मलाई त्यो बेला थाहा थिएन। मलाई रचनात्मक उपकरणहरू दिइयो र कुनै नियमहरू थिएन।
अब यदि तपाइँ न्यूयोर्क शहरको फाइन आर्ट संसारमा हेर्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ कि यो धेरै अव्यावहारिक छ। प्रश्न उठ्छ, यदि तपाईं त्यो झण्डा कुनै तरिकामा भित्तामा रहिरहनुहुनेछ भने?
मैले तपाईंको प्रिन्टहरू तपाईंको आवश्यकताको लागि तयार पारेँ। अवधारणाको रूपमा मसँग मूल विचारहरु संग फिल्ड डे फ्लश थियो। अवश्य पनि मूल विचारहरू मेरो प्रत्येक कार्यहरूमा भिन्न डिग्रीहरू हुन्।
आजका दिनहरू मेरो फ्लोरल डिजाईन पोस्टर र क्यानभास प्रिन्टको रूपमा बेच्दछु।
यी छविहरू फूलहरूमा आधारित छन्। मेरो वेबसाइटमा छरिएका फूलहरूको सजिलो पहुँचको रूपमा, मेरो हेर्नुहोस् गुलाब र फूलहरू संग्रह।
भान गोग को एक परिचय
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा १ 16 भ्यान गोग ब्लेन्ड गर्नुहोस्
तपाईं सम्भवतः यो प्रख्यात र प्रेरित गुलाब र आइरिसहरू भिन्सेन्ट भ्यान गोगले चिन्नुहुन्छ। मलाई टुक्रा मन पर्छ।
पोष्ट आधुनिक कलाकारको रूपमा फूलहरूको पेन्टि using प्रयोग गर्दै, मैले मेरो कुरा गर्नुपर्‍यो। चित्रकला आधुनिकीकरण गर्न र यसलाई बनाउनको लागि केहि प्रयास गर्न, मँ भन्छु, धेरै राम्रो छ? तपाईं न्यायाधीश हुन।
तपाईं धेरैलाई यो प्रेम हुनेछ। धेरै व्यक्तिहरूले मेरो वेबसाइट देख्दछन्, र मेरो कला धेरै रोचक पाउँदछन्। त्यो कुरा हो। पूर्ण नयाँ दिशामा जानु उत्साहजनक छ।
म मेरो कलेज कक्षामा नयाँ पथमा काम गर्दै थिए। सन् १ 1990 2006 ० मा स्नातक पछि २०० XNUMX मा मैले त्यो नयाँ चुनौती खोल्न सुरु गरें।
मेरो सवारी रमाईलो छ। तपाईं केहि अप्रत्याशित चीजहरू देख्नुहुनेछ।
अर्को Gauguin, र अप्रत्याशित
तपाईंले गुलाबका फूलहरू पाउनुभएको छ जुन इन्द्रेणी जस्तै सुन्दर र साधारण रंगका रंगका छन्।
यद्यपि तपाईंले वास्तवमै पहिले देख्नु भएको छैन, म १ Paul पल गाउगिन चित्रहरू प्रयोग गर्दछु जुन काटिएको छ भने एक पंखुडीमा फिट हुन।
“Tis तर तपाईंको नाम त्यो मेरो शत्रु हो;
तपाईं आफैं हुनुहुन्छ, मोन्टोगेग नभए पनि।
मोन्टग के हो? ... O, केहि अन्य नाम बन्नुहोस्!
नाममा के छ? जसलाई हामी गुलाब भन्छौं
कुनै पनि अन्य नामद्वारा मीठो गन्ध मिल्नेछ;
त्यसोभए, रोमियो उनी रोमियो नभएको भए,
ऊ dearणी छ कि प्रिय पूर्णता कायम राख्नुहोस्
त्यो शीर्षक बिना। ”(रोमियो र जुलियट, ऐक्ट -२, दृश्य -२, लाइन्स -38 49--XNUMX)
कसले अलि शेक्सपियरको प्रतिरोध गर्न सक्छ?
यदि तपाईं यस छविमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईं मेरो “फूल र गुलाब संग्रह” मा अवतरण गर्नुहुन्छ। मेरो "द गुलाब अफ गाउगुइन" को तीन संस्करणहरू छन् जुन तपाईं हेर्न चाहनुहुन्छ। तपाईं आराम र यहाँबाट एक कप कफीमा सम्पूर्ण संग्रह हेर्न सक्नुहुन्छ।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा Gauguin को गुलाब
के तपाईं पोष्ट मॉडर्नको मतलब भनेको मा ह्यान्डलको लागि सोध्दै हुनुहुन्छ?
उत्तर आधुनिकता परिभाषित गर्नका लागि सब भन्दा सरल, स्पष्ट तरीका, सबै पहिले नै गरिएको छ। विगतबाट लिएर, हामी केहि नयाँ सिर्जना गर्दछौं। यो विरोधाभास हो। हामी आजको दिनलाई पुन: खोज्छौं।
भिन्सेन्ट भ्यान गोग
तपाईंले भेन गोगलाई याद गर्नुहुनेछ मेरो मनपर्ने कलाकारहरू मध्ये एक हो। उहाँको उत्कृष्ट कृतिहरू पुन: कार्य गर्नु मेरो कामको पछाडि प्रमुख प्रेरणा शक्ति हो।
यो दु: खको कुरा हो, भिन्सेन्ट भ्यान गगले आफ्नो जीवनकालमा कहिले पनि कुनै पेंटिंग बेचेन। यसमा, इन्टरनेटले मलाई मेरो विचारहरू बेच्न मद्दत गरिरहेको छ। मेरो प्रारम्भिक स्कूलहरूमा श्रवण समस्याको साथ मेरा प्राथमिक स्कूलहरूलाई ध्यानमा राख्दै, म आफ्नो कला बनाउन र बेच्न दिन्न।
कामको विविध प्रकारको सिर्जना गर्नु मेरो लागि एकदम राम्रो विचार हो। मलाई थाहा छैन तपाईं के माया गर्नुहुन्छ। केही प्रिन्टहरू व्यक्तिले खरीद गरेका छन्, मैले सोचे कि कहिले बेच्दैन। अन्य चीजहरू जुन मैले सोचे कि लोकप्रिय हुन कहिल्यै बेचिएको छैन। केवल तपाईं कलाको काममा के हेर्नुहुन्छ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा तह4भ्यान गोग
मलाई लाग्छ कि यो बेच्नेछ। अन्य कलाकारहरूले मलाई भनेका छन् यो धेरै सुन्दर छ। केही व्यक्तिले मलाई भनेका छन् यो अद्भुत छ। निब्बलहरू काटने छैन।
जेसुकै होस्, म सिर्जनाबाट ठूलो सन्तुष्टि प्राप्त गर्छु। अन्त मा, यो सार्थक भएको छ।
अमूर्त को सानो अजीब आकार को टुक्रा पूरा बनाउँछ। जब यो लाक्षणिक कलाकृतिहरु को लागी आउँछ।
तपाईं आराम संग पछाडि बस्न र यी कार्यहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो म चाहन्छु। यो ब्लग प्रकाश पठन हो।
भन्नको लागि पर्याप्त छ, म "अमूर्त" उल्लेख गर्ने छु किनकि भ्यान गोगको एब्स्ट्र्यासनबाट कम्प्युटर पिक्सेल एब्स्ट्र्यासनमा आउने यी मेरा उपकरणहरू हुन्।
जब मैले कलालाई मास्टरपिसबाट बनाएको हुँ, मैले डिजिटल टूलहरू प्रयोग गर्न शुरू गरे यीमध्ये केही नयाँ टुक्राहरू समावेश गर्छु।
तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मसँग एउटा र single्ग प्यालेट छैन। पोस्ट आधुनिक कलाको पर्याप्त रंग सिद्धान्त छैन। मैले भर्खरै मेरो आफ्नै काम गरें। मेरो एउटा मार्गनिर्देशन सिद्धान्त भनेको प्रत्येक रंगको टोनलाई तोकिएको टुक्रामा मिलाउन थियो।
फूलहरूमा तपाईंको रूचि संग, तपाईं यो ब्लगमा अधिक प्रयोगात्मक अभिव्यक्तिहरू हेर्न आउनुभयो। तर ट्युलिप फर्ममा ट्युलिप रहन आवश्यक छ।
तपाईंको रंगीन बाँसुरी शैम्पेन गिलास। म फूलको सारमा जान्छु, तर अब कुनै जीनस छैन।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा एबस्ट्र्याट फ्लावर २
यो तीन एब्स्ट्र्याक्टर्सको सानो श्रृंखला ढिलो कम्प्युटर डिजाइनको साथ प्रयोग। अझै डिजिटल उपकरण यति सटीक छ।
मेरो पहिलो रेखाचित्र कक्षा छाडा बन्न मा केन्द्रित। एक छवि बनाउन काँधबाट पाखुरा सर्दै। नाडी को विपरीत।
यटेरियर र हालसालैका साथीहरूबाट चित्रकारहरू हेर्दै, मैले डिजिटल कार्यको आवश्यकता पर्दछ भन्ने महसुस गरे।
यो एकदम नयाँ सौन्दर्य बन्छ। फ्रेम र म्याट गरिएको, यी छविहरू सुन्दर छन्।
तीन मध्ये अन्तिम ट्विस्ट
हरियोले घर खोज्छ। हामी चर्चित ग्रहमा बस्छौं। दशकौंको प्रगतिको साथसाथै सजावटमा हरियोका रंगहरू।
प्रश्नको भीख माग्दै हरियोको छाया अद्वितीय छ, "यो १ 1970 ?० को दशकको शुरुको हो? र फूल शक्ति? " ठिक छ, यो हरियो अहिलेको लागि अद्वितीय छैन।
म तपाईंलाई सजावटको लागि नयाँ रंग प्यालेटको साथ मनोरन्जन गर्न काम गर्दैछु।
मलाई थाहा दिनुहोस् तपाईले यस छविलाई कसरी हेर्नुहुन्छ। हामी प्रत्येकले र different्ग फरक देख्छौं।
तपाईंको प्रतिक्रिया सराहना गरिएको छ। मानिसहरूले वर्षौंको लागि मेरो अन्तर्दृष्टिको संसार खोलेका छन्।
यो कसरी ढिलो हुन सक्छ?
“म tawt म एक पोखर Tat taw। मैले गरे, मैले गरे। ”- पहेलो क्यानरी ट्वीटी।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा हावामा फूलहरू
म तिमीलाई अर्धव्यापी दिन्छु। शुद्ध खेल, म एक कम्प्यूटर छवि को साथ कुनै looser प्राप्त गर्न सकेन।
हावाले तपाईंलाई उठाउछ, र तपाईंलाई टाढा लैजान्छ। मेरो एक दोस्तले यस तस्विरलाई एक महान तनाव राहतको रूपमा सम्बन्धित छ। उनी अनन्तसम्म सुन्तलाको आकारमा थोरै फुरिfबिग्रेको लागि हेर्छिन्।
उनी वास्तवमै मेरो सबैभन्दा हाँसोकी साथी हुन्। उनले आफ्नो फायरप्लेस देखि पर्खालमा यी छविहरूको ″ 48 डिग्री क्यानभास लटकाइन्। प्रि कोविड, उनका साथीहरू रोक्थे र भन्छन्, "के यो एक बिरालो" छ, केन्द्रको फूलतिर औंल्याउँदै?
प्रतिक्रिया, "केवल उनीलाई थाहा छ कि ऊ बिरामी हो कि होइन", उनको आँखामा झिम्क्याइन्छ।
उनको एक राम्रा साथी मेरो छविमा यो साइट किन्न गए, तर मैले तपाईंलाई अब के देखाउँदैछु भनेर खरीद गरें…।
डिजिटल फूल चित्रकारी
तपाईं यो मेरो ब्रश स्ट्रोकमा देख्न सक्नुहुनेछ। म रंग गर्दछु। अतिरिक्त नियन्त्रण भनेको मेरो नकारात्मक ठाउँको र is्ग हो, पृष्ठभूमि भन्न कल्पित तरीका।
ब्लूजको प्रयोगले गहिराइलाई सदाको लागि तान्न सक्छ। जस्तै नीलो आकाशले क्षितिज भन्दा टाढा गइरहेको छ।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा रातो फूलहरू
डेभको रूपमा बोल्दै, कलाकारको रूपमा होइन, यस निलोले मलाई समातेको छ। डिजिटल रंग चयन गर्न सजिलो छैन। म भित्र जान चाहान्छु भन्ने कुरा जान्दा, मलाई र the्ग swats मा चारैतिर लिनु आवश्यक पर्दैन।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा कमजोर
“एक मिनेट मिस्टर होल्ड गर्नुहोस्! ती उही दुई छविहरू हुन् ", म तपाईंलाई अहिले भनेको सुन्न सक्छु।
हो, म तपाईंलाई दोषी छु। LOL
फ्रेगिललाई बढी ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, क्लिक गर्दै मेरो बिक्री वेबसाइटमा छवि दृश्य ल्याउँदछ। त्यहाँ एक सौंदर्य गुण तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। ग्रेहरू तातो छन्।
यस तस्विरमा अवधारणागत कमजोरी छ। कोमलता जुन तपाईंको मुटुमा पुग्छ।
अप्रोपोस, म तपाईंलाई यो अन्तिम सिर्जनासँग छोड्छु।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा मृत्यु जीवन बाहिर
मेरो बुबाले यस छविलाई तुरून्त प्रेम गर्नुभयो। जीवनको बारेमा केहि उद्देश्यपूर्ण। मेरो लागि त्यो एक इनाम थियो।
मैले भिन्सेन्ट भ्यान गगको गुलाब र आइरिसहरू धेरै पटक पुन: निर्माण गरें। यद्यपि यो तस्बिर अझ धेरै कथन बन्छ।
सम्पादनमा फर्केर आउँदैछ र तपाईंलाई मेरो प्रतिक्रिया पनि दिनुहुन्छ, बुबालाई मेरो लेखमा उल्लेख गरिएको मन पर्‍यो। आमा बिरालाहरूसँगै “हावामा फूलहरू” किन्न चाहन्छ। आमा कुकुर व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसले पूर्ण रूपमा मलाई चकित पारे।
तपाईंले डिजिटल विचारहरू रूपान्तरण कला देख्नुभयो। सौंदर्यशास्त्र को विविधता धेरै व्यापक छ।
मेरा विचारहरू हाम्रो संस्कृतिमा गहिरो निहित छन्। यदि कला को लागी शपिंग तपाईं नयाँ प्रेरणा चाहनुहोला। यहाँ सफलता एक पुनर्जन्म हो, कला र जीवन को नवीकरण।
त्यहाँ फाइन आर्ट्स, डिजिटल विचारहरू v मूल चित्रकारीहरुमा एक विशिष्ट सांस्कृतिक गणना भइरहेको छ। आर्टवर्ल्ड, यो मनपर्दछ वा सक्दैन, ग्यालरीको विश्वमा एक ब्रेकडाउनबाट निस्किरहेको छ। ग्यालरीहरू डिजिटल कला कसरी बेच्ने भनेर घाटामा छन्।
दृष्टिकोण कलाकारको लागि हो, म, सी theहरू द्वारा साँढे लिने, काँधमा तपाईंलाई ट्याप गरेर, र "म यहाँ छु" भन्नुहोस्। मेरो लेखहरूमा प्रतिक्रिया न्यानो र सहयोगी छ।
कलेक्टरहरूले केहि धेरै रमाईलो खरीद गरेका छन्। न्यु योर्क शहरका एक जोडीले किने “अमेरिकी बौद्धिक।"दुई हप्ता पहिले उनीहरूको बैठक कोठाको लागि। यो टुक्रा जातीय समानताको लागि धेरै अमूर्त कथन हो। उनी पूर्ण रूपमा पाए। प्रिन्ट ए 84 XNUMX डिग्री कैनवास भित्ति चित्र हो।
के हाम्रो समयको बारेमा यति चाखलाग्दो छ, यस डिजिटल युगमा, प्रिन्टहरू बढाउँदै 8 १० 108 सम्ममा ″ मा सुरू गर्न सकिन्छ। ″ 84 डिग्री प्रिन्ट फिट आफ्नो ठाउँ फिट।
खैर, अमेरिकी बौद्धिक संग्रह पोष्ट पप कलाकृति हो। मेरो सबै थीमाधारित संग्रहका लागि ओभररेचिंग विधा पोस्ट मोडर्निज्म हो।
म तपाईंलाई विचार, भावना, र परिप्रेक्ष्यको साथ छोड्न चाहन्छु कि उच्च अन्त राम्रो कला म म र अन्य कलाकारहरू द्वारा अनलाइन उपलब्ध छ। तपाइँ डिजिटल सौंदर्यशास्त्र पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको रुचि र तपाइँको जीवन शैली फिट गर्दछ।
मेरो वेबसाइटमा छवि बिक्री पृष्ठ हेर्नको लागि तपाईंको कल्पनाको कुनै छविमा क्लिक गर्नुहोस् (माथिको कभर छविमा लागू हुँदैन)।
प्रश्न: यो सबै पहिले गरिएको छ? उत्तरहरूले तपाईंलाई चकित पार्न सक्छ।
क्यानभास प्रिन्टहरूआधुनिक ग्यालरी पोष्ट गर्नुहोस्पोस्टर